विस्तार माटो बालुवा: विशेषताहरु र आवेदन
LECA प्रकाश को एक porous संरचना संग एक भवन सामाग्री, यो विशेष भट्टियों मा calcined, कम-पग्लिने क्ले बनेको छ। पर्याप्त वितरण फरक तत्त्वहरू भइरहेको विस्तार माटो बालुवा प्राप्त।
बालुवा अक्सर सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ सिमेन्ट screed, सतह को मात्र होइन पङ्क्तिबद्ध, तर पनि तल्ला इन्सुलेशन प्रदान जो। भौतिक ठोस मिश्रण को घटक को छ। यो पनि एउटा फिलर रूपमा प्रयोग गरिन्छ hydroponic प्रणाली।
सानो अंश विस्तार माटो बालुवा गर्मी संरक्षण को उच्च स्तर द्वारा विशेषता, चिनाई मोर्टार को उत्पादन को लागि आदर्श छ। यो प्राकृतिक सामाग्री देखि बनेको छ र यसको संरचना मा अशुद्धताओं समावेश गर्दैन। परिणामस्वरूप granules कारण जो विशेषता सुविधाहरू प्राप्त उच्च तापमान, गर्न subjected छन्:
स्थायित्व र बल;
विस्तार माटो बालुवा श्रेणी मा पतन थोक सामाग्री को र Rubble र रोडा संग interchangeably प्रयोग गरिन्छ। यो optimally इलाकाको व्यवस्था लागि उपयुक्त छ। साथै, बालुवा उपनगरीय क्षेत्रमा र जल को भूमिका मा फूल बेड र बाटाहरू को डिजाइन मा अपरिहार्य छ। उहाँले तापमान प्रभावित छैन, त्यसैले भन्ने रूखहरू र विभिन्न प्रकारका संरचना को बलियो बनाउँछ को जरा ढाक्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सामाग्री को porous संरचना समाधान संग सुरक्षित पकड प्रदान गर्दछ र उदाहरण हल्का ठोस ब्लक लागि, उत्पादनहरु को बल बढ्छ। यो विशेष गरी परिदृश्य डिजाइन महत्त्वपूर्ण र छत, फर्श र पर्खालहरु को ध्वनि इन्सुलेशन लागि हो जो सील voids लागि उपयुक्त छ। विस्तार माटो बालुवा (0-5 मिमी अंश) पानी र विभिन्न पाइप प्रणाली को व्यवस्था लागू गरिएको छ।
विस्तार माटो रोडा र समान विशेषताहरु अन्य सामाग्री को लागि उत्कृष्ट विकल्प कार्य। विशेष मा otsypok सिर्जना गर्दा, बगैचा बाटाहरू लागि pavings र तकियों प्रयोग गरिन्छ। यो केवल भौतिक सबै प्राकृतिक हो रूपमा पनि बचत खर्च छैन प्रदान गर्दछ, तर वातावरण मैत्री।
गुणस्तर को प्राथमिक उपाय पनि porous फिलर को बल हो। यो प्यारामिटर एक धातु पंच को माध्यम द्वारा सिलेंडर मा छर्रहरुमा squeezing मा हुन्छन् जो एक विशेष प्रविधी, प्रयोग गरेर निर्धारण गरिन्छ। यसरी फिलर को बल झल्काउँछ जो भोल्टेज मूल्य, निर्धारित। तर प्रविधी मुख्य एक खालीपनको प्रभाव को संरचना र प्रकारका बल मान मा granules छ, कमियां बिना छैन। यो अलग-अलग कारखानों मा उत्पादित गर्दै छन् भने, तुलना पनि समान porous fillers को कुनै सम्भावना छ किन छ जो प्राप्त डाटा distorts।
अघि मिडियामा सङ्कुचन granules बल आवश्यक pretreatment को डिग्री निर्धारण गर्न। यो सिलाई अनाज समावेश छ। खोल्दै समर्थन समानान्तर समतल सतहहरु गठन गर्न पूर्व दुई पक्ष मा प्रदर्शन गरिएको छ। छर्रहरुमा को फारम बैरल बन्नेछ। खुट्टामीटर को शुद्धता परीक्षण को लागि प्रयोग अनाज को एक वृद्धि नम्बर मध्यम बल बढ्छ।
भौतिक व्यापक आवेदन प्रदान सकारात्मक एक अधिकता छ। सबै भन्दा व्यापक विस्तार माटो बालुवा निम्न क्षेत्रमा खरिद:
पाइपलाइन, छतों, पर्खाल र नींव को इन्सुलेशन;
उत्पादन चिनाई मोर्टार गर्मी संरक्षण को एक उच्च गुणक संग;
बाँध, पुल र सडक को सुधार;
को उत्पादन ठोस ब्लक र हल्का ठोस।
सुक्खा बालुवा, विस्तार माटो सक्रिय विभिन्न वस्तुहरु को थर्मल इन्सुलेशन लागि भर्नको रूपमा प्रयोग भएको छ, र यो हीड्रोपोनिक्स र कृषिमा अपरिहार्य छ। साथै, यो अक्सर बोट उत्पादक जल लागि प्रयोग गरिन्छ।
मजबूत porous संरचना र साथ प्राप्त उत्पादनहरु को स्थायित्व र विश्वसनीयता प्रदान गर्नुहोस्। बालुवा एकदम उचित लागत अलग, र अन्य यस्तै सामाग्री भन्दा धेरै सस्ता लागत, त्यसैले यसलाई परिदृश्य डिजाइन मा, तर पनि विभिन्न सुविधा को निर्माण मा मात्र होइन सामान्य छ।
सम्बन्धहरु को निर्माण
बालुवा टाढाको कुना, विपरीत ढोका बाट निर्मित भर्नु। बिकन स्तर खाट माथि 2-3 सेमी हुनुपर्छ। विशेष उपकरण को माध्यम द्वारा समय समयमा backfill लगायो छन्। अर्को, तल्ला तरल सिमेन्ट ढाकिएको छ र ध्यानपूर्वक compacted, यो कण बढी बाक्लो आसंजन लागि आवश्यक छ।
24 घण्टा पछि समाधान समान रूप हालिएको छ। विस्तार माटो बालुवा को Screed केही दिन भित्र dries। कोटिंग जफत गरेपछि हटाइएको र Lighthouses समाधान अंतराल ढाक्न गठन हुनुपर्छ। सुकाएपछि सतह पीस गर्न subjected छ।
चुनिएको तल्ला कवर दुई हप्तामा राखे छ। यो एक को छत, लिनोलियम वा laminate हुन सक्छ।
यो के हो - निर्माण मा PPR? उत्पादन डिजाइन काम (PPR) - सामग्री, संरचना र आवश्यकताहरु
एक राम्रो छ: तल्ला ताप लागि टाइल टाँसन?
तपाईं जानकारी फेला सुझावहरूको मा घर को लेआउट कसरी थाह
देश मा ट्रयाक मा टाइल: चयन सबै भन्दा राम्रो
आफ्नै हातले पीवीसी प्यानल स्थापना
"डबल ग्लाजिंग" - यो नाम बुझ्न कसरी?
केही कारणले त्यहाँ वयस्क मा बारम्बार मल छ?
मशरूम meatless संग अनाज बनाइएका meatballs लागि नुस्खा
Danis Zaripov। रूसी हकी खेलाडी, "Metallurg" (Magnitogorsk)। जीवनी
को cranberries हाम्रो शरीर को लागि उपयोगी?
मानिसहरू मा papillomavirus: प्रसारण र लक्षण को तरिका
पागलपन - एक वाक्य?
म बिरामी प्राप्त गर्न सुरु ... एक चिसो को पहिलो साइन मा के गर्ने?
नासा स्पेस एजेन्सी को एक पूर्व कर्मचारी फोटो हेराफेरी को accuses
"Ussuri बाम": संरचना र आवेदन
प्लेकार्ड3एल - यसको अर्थ के हो? कक्षाको सेवा, वैगन कोटिहरू
Capercaillie vulgaris: वर्णन, फोटो
मुगल युग को एक उत्कृष्ट नमूना। नयाँ दिल्ली मा Humayun गरेको Tomb